Isbarbar dhiga luqadaha barnaamijyada
Sayniska Kombiyuutarada Barnaamijka C & C ++
Isbarbardhigida Barnaamijyada Luuqadaha Barnaamijka Cunuga
Sidee bay u kicinayaan?
Laga soo bilaabo 1950-yadii, cilmi-yaqaannada kombiyuutarada ayaa sameeyay mashruucyo kumanaan ah. Qaar badan oo ka mid ah waa wax aan qarsoodi ahayn, oo laga yaabo in loo abuuro Ph.D. dood iyo marna ma maqlin tan iyo tan. Qaar kalena waxay noqdeen kuwo caan ah oo markaa ka dibna jajabiyay sababtoo ah taageero la'aanta ama sababtoo ah waxay ku koobnaayeen nidaam kombuyuutar gaar ah. Qaar ka mid ah kala duwanaanshaha luqadaha hadda jira, oo ku daraya sifooyin cusub sida is barbardhigga - awood u lahaanshaha qaybo badan oo ka mid ah barnaamijyada kombiyuutarada kala duwan oo isku mid ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maxay tahay luuqadda barnaamijka?
Isbarbardhigida Barnaamijyada Luqadaha
Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo lagu barbardhigo kombiyuutarada Luqadaha laakiin si sahlan waxaan u isbarbar dhigi doonaa marka la eego habka isugeynta iyo qaabaynta qaabka.
Soo-ururinta Mashiinka Mashiinka
Luqadaha qaarkood waxay u baahan yihiin barnaamijyo si toos ah loogu beddelayo Qodobka Dhaqaalaha - tilmaamaha uu CPU si toos ah u fahmo. Nidaamkan isbedelka waxaa lagu magacaabaa isku darid . Luqadaha Golaha, C, C ++ iyo Pascal waa luuqado la isku habeeyey.
Luqadaha la tarjumay
Luqad la tarjumay ayaa lagu baari doonaa runtime. Xadhig kasta waa la akhriyaa, la falanqeeyaa, oo la fuliyaa. Inaad dib u daabacato khadad mar kasta oo ku jira wareegga isbeddelka ah waxa ka dhigaya luqadaha tarjumada ah si tartiib ah. Tani waxay ka dhigan tahay in nambarka la turjumay uu soconayo inta u dhexeysa 5 ilaa 10 goor tartiib tartiib ah marka la barbar dhigo code.
Sababtoo ah barnaamijyada isku dhafan had iyo goor way ka dhaqso badan yihiin tarjumaada, luqadaha sida C iyo C ++ waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ugu caansan qorista ciyaaraha.
Java iyo C # labaduba waxay isugu jiraan luuqad tarjumaad ah oo wax ku ool ah. Sababtoo ah Mashiinka Virual oo tarjumaya Java iyo habka .NET ee ku shaqeeya C # ayaa si aad u fiican loo farsameeyaa, waxaa la sheegayaa in codsiyada ku qoran luuqadahaasi ay yihiin kuwo dhakhso ah haddii aan si dhakhso ah loogu darin C ++.
Habka kale ee laysku barbardhigo luuqadaha waa heer is-qorid. Tani waxay muujineysaa sida ugu dhow luuqad gaar ah u yahay qalabka. Xeerka Mashiinka ayaa ah heerka ugu hooseeya ee Luqadda Golaha oo kaliya ka sarreeya. C ++ wuu ka sarreeyaa C sababta oo ah C ++ wuxuu bixiyaa sarrayn dheeraad ah. Java iyo C # waxay ka sarreeyaan C ++ sababtoo ah waxay ku ururiyaan luqad dhexe oo loo yaqaan ' bytecode'.
Sida Loo Barbar dhigo
> Luqadaha Laaban Luqada Leh
> Si macquul ah loo turjumo
> Wuu turjumay
Faahfaahinta luuqadahan waxay ku jiraan labada bog ee soo socda.
Xeerka Mashiinka waa tilmaamaha uu fuliyo CPU . Waa sheyga kaliya ee ah in maaddada CPU ay fahmi karto oo fulin karto. Luuqadaha la tarjumay waxay u baahan yihiin arji la yidhaahdo turjubaan kaas oo akhriya khad kasta oo ah barnaamijka koodhka ee barnaamijka ka dibna 'shaqeeya'.
Turjumidda waa fududahay
Way fududahay in la joojiyo, isbedelo, dibna loo soo celiyo codsiyada ku qoran luuqad tarjumaad ah waana taas sababta ay caan u tahay barashada barashada. Ma jiro marxalado isku dhafan oo loo baahan yahay. Nidaamku wuxuu noqon karaa nidaam gaabis ah. Codsi weyn oo C ++ ah ayaa qaadan kara daqiiqado illaa saacado si loo soo saaro, iyadoo ku xiran hadba inta codsiyada dib loo dhisi doono iyo xawaaraha xasuusta iyo CPU .
Marka kumbuyuutarada marka hore la arko
Marka kombuyuutaradu markii ugu horreysey noqdaan kuwa caan ah 1950-meeyadii, barnaamijyadaa waxaa lagu qoray koodhadhka mashiinka maadaama aysan jirin hab kale. Barnaamijyadu waa in ay jir ahaan u rogaan bedelaad si ay u galaan qiimaha. Tani waa hab adag oo gaabis ah oo abuuraya codsi ah in luuqadaha kombiyuutarka loo baahan yahay in la abuuro.
Isku-Baabi-Dhawaaq Xoog Si Loo-Yeelanayo!
Luqadkani waa mid la aqrisan karo oo ah "Code Code", waxayna u egtahay sidan > Lacag A, $ 45 Sababtoo ah waxaa ku xiran yahay CPU ama qoyska oo ku xiran CPU-yada, Luqadda Golaha (Assembly Language) ma ahan kuwo la qaadi karo , marwalba waa wax lagu barto oo wax lagu qoro. Luqadaha sida C waxay hoos u dhigeen baahida loo qabo Barnaamijka Luqadda ee Golaha marka laga reebo halka RAM ay xadidan tahay ama loo baahan yahay lambarka muhiimka ah ee loo baahan yahay. Tani waxay sida caadiga ah ku jirtaa koodhka xudunta ee wadnaha Nidaamka Hawlgalka ama darawalnada kaararka video.
Luqadda Golaha ayaa ah Xeerka Heerka ugu hooseeya
Luqadda Luqadda waa heer aad u hooseeya - badankood oo qaanuunku u guuro qiimaha u dhexeeya diiwaannada CPU iyo xasuusta. Haddii aad ku qorayso xirmo lacag ah oo aad rabto inaad ka fakarto marka la eego mushaarka iyo canshuurta laga jaray, ha diwaangelin A to Memory xyz. Tani waa sababta luuqadaha heerka sare sida C ++, C # ama Java waa wax soo saar badan. Barnaamijka ayaa ka fekeraya marka la eego mashaakilka dhibaatada (mushaharka, jar-jarista, iyo xisaabinta) ma aha aaladda qalabka (diiwaanka, xasuusta iyo tilmaamaha).
Barnaamijyada Nidaamyada C
Perl- Websaydhka iyo Utiliyadaha
Aad u caanka ah ee dunida Linux , Perl wuxuu ka mid ahaa luuqadaha ugu horeeya ee websaydhka, isla markaana maanta waa mid caan ah. Si aad u sameysid "barnaamij degdeg ah oo wasakh ah" barnaamijka shabakada ee ku yaala shabakada waa mid aan la taaban Karin waxaana ay wadataa website-yo badan. Waxay u muuqataa in waxoogaa ay ku dhejiyeen PHP sida luuqadda webka .
Codaynta bogagga internetka ee PHP
PHP waxaa loogu talagalay luqad loogu talagalay Websaytka Webka waxayna aad u caan ku tahay Linux, Apache, MySql iyo PHP ama LAMP si gaaban. Waxaa la tarjumay, laakiin horay loo qoondeeyey si codka si dhakhso ah u dhaqmo. Waxaa lagu kici karaa kombiyuutarada muraayadda laakiin ma aha mid si weyn loo isticmaalo horumarinta codsiyada maabka. Iyadoo ku saleysan C syntax , waxaa sidoo kale ku jira Noocyada iyo Fasallada.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan PHP ee ku saabsan bogga ku saabsan PHP.
Pascal waxaa loo qorsheeyey sidii luqad barasho dhawr sano ka hor C, laakiin wuxuu aad u xaddidnaa xarfo fara badan iyo fayl-galka faylka. Qaar badan oo wax soo saare ayaa kordhiyay luqadda laakiin ma jirin hogaamiye guud ilaa Borlan Turbo Pascal (loogu talagalay Dos) iyo Delphi (Windows). Kuwani waxay ahaayeen kuwo fulin xoog leh oo ku daray farsamooyinka ku filan si ay ugu dhejiyaan horumarinta ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, Borland waxay ka soo horjeedda Microsoft oo aad u ballaaran waxayna lumisay dagaalka.
C ++ - Luqad Aasaas ah!
C ++ ama C oo lagu daray fasalada sida asal ahaan loo yaqaanay waxay soo gashay toban sano ka dib C iyo si guul leh u soo bandhigtay barnaamijka Orient Oriented Programming C, iyo sidoo kale qaababka sida ka reebista iyo sheybaarada. Barashada dhammaan C ++ waa hawl weyn - waa mid aad u adag oo ah luqadaha barnaamijka halkan ee ugu adag laakiin markaad awood u leedahay, wax dhibaato ah kuma qabtid luqad kale.
C # - Qoraalka Microsoft ee Big Bet
C # waxaa abuuray naqshadeeyaha Delphi 's Anders Hejlsberg kadib markii uu u soo guuray Microsoft iyo Delphi Developers waxay dareemayaan guriga sida muuqaallada sida Windows ah.
C # ereyga waa mid aad u la mid ah Java, taas oo aan la yaab leh sida Hejlsberg ayaa sidoo kale ka shaqeeyay J + + ka dib markii uu u guuray Microsoft. Baro C # oo aad si wacan u socotaa si aad u ogaato Java . Luqadaha labada luuqadood ayaa ah kuwo isku dhafan, sidaas darteed halkii ay ku qori lahaayeen koodhka mashiinka, waxay isku ururiyaan bytecode (C # waxay isku daraan CIL laakiin waxay iyo Bustaanka ay isku mid yihiin) kadibna ayaa la tarjumayaa .
Tani waxay u oggolaanaysaa qaybo ka mid ah bogagga shabakadda in ay cusboonaysiiso server ka iyada oo aan dib loo soo rogin bogga oo dhan.
ActionScript - Lahaansho jilicsan!
Aasaasku waa ereyo kooban oo loogu talagalay bilowga Hore Dhammaan Calaamadaha Waxbarashada Calaamadaha oo loogu talogalay inay baraan barnaamijyada 1960-meeyada. Microsoft waxay ku samaysay luuqadooda iyaga oo leh noocyo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin VbScript ee bogagga shabakadaha iyo Visual Basic aad u guulaystay. Nooca ugu dambeeyay ee VB.NET oo tanina waxay ku socotaa isla bogga .NET sida C # waxayna soo saartaa isla CIL bytecode.
[h3Lua Luqad qoran oo bilaash ah oo ku qoran C oo ay ku jiraan ururinta qashinka iyo kabaha. Waxay ku xirantahay si fiican C / C ++ waxana loo adeegsadaa warshadaha cayaaraha (iyo ciyaaraha aan ciyaarin) sidoo kale qoraalka cayaaraha, munaasabada dhacdooyinka iyo xakamaynta ciyaarta.
Inkasta oo qof kastaa leeyahay luuqad ay jecel yihiin, isla markaana waqti iyo maalgelin ku barteen sida loo baranayo sida barnaamijka loo dejiyo, waxaa jira dhibaatooyin si fiican loo xalliyo luuqada saxda ah.
Hase yeeshee, luuqad kasta oo aad doorato, haddii ay tahay C, C ++ ama C #, ugu yaraan waxaad ogtahay inaad tahay meesha saxda ah si aad u barato.
Xiriirada Barnaamijyada Kale Luqadaha Barnaamijka
Maxay Taas micnaheedu tahay in Taabashada C ++?
Baro C ++ Fasalada iyo Walxaha
Maxay tahay mashiinka software-ka?
Maxay Tahay Sababta Barnaamijka Kombiyuutarka?
C ++ Bilowga - Ka barto C ++
Waa maxay barnaamijka kombuyuutarka?
Qoraalada xakamaynta ee C ++
Baro Barnaamijka: Bar Tababar Tababar
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo loo adeegsan karo SQLite Codsiga C #
C ++ Gawaarida iyo Biyaha
Hello World ee C on Raspberry Pi
Quotes jacayl weyn
Mashaariicda furan ee furan ee C / C ++ / C #
Muxuu Ilaah Muujin Karaa?
Ethanol Formula Molecular iyo Formula Ammaanka
Sida loo kordhiyo (ama Diidmo) martiqaad Faransiis ah
Ka qaybgal carruurta ay heesaha ku baran karaan tusaale ahaan tusaalooyin
Luqadda Taleefanka Qaangaarka Talyaaniga ee Talyaaniga: Warqad C
Sida loo habeeyo Ukulele
James K. Polk: Xaqiiqooyin muhiim ah iyo Qoris kooban
George Armstrong Custer Dagaalka Sokeeye
Ogeysiis ku saabsan Masters iyo Imtixaanka Dhakamaynta Dhakhaatiirta
Asaladaha Gobolka Saskatchewan ee Kanada
Baaskiilada Roobka iyo Fit
'Noel First' 'Song Song
Sidee u soo dhawaataa Sawirka Farshaxanka leh Sawirradaada
Dib-u-Celinta: Caddeynta ugu fiican
Fahmidda Qaybaha Axsaabta
Aragtida "Deep State", Sharaxay
Khatarta Wareegga Wareegga
Tixraacyada Sawirrada Farshaxanada: Wali Nolol
Sida Loogu Helo Rugahaaga Vocal
Marka Masiixiyada loo isticmaalo in lagu caddeeyo rabshadaha
Fureyaasha si guul leh lagu ciyaaro Golf
Mashaariicda sayniska ee Halloween
Maxay ahayd Bakufu?